Mogadishu – Page 19 – Somali Sounds
Aqriso:-Howlgal lagu Beegsaday Horjoogayaal Iyo Sarkaal Ajnabi ah Oo ka dhacay Jubada Dhexe (NISA)
September 14, 2019 September 18, 2019 MogadishuComment(0)
Wararka ka imaanaya gobolada Jubada dhexe iyo shabeelaha hoose ayaa sheegaya in duqeymo ka dhaceen sida ay xaqiijinayaan goobjoogayaal kusugan halkaasi. Ilo wareedyo kala duwan oo ku sugan degmooyinka jilib iyo Bu’aale oo aan laxiriirney ayaa sheegaya in ay maqleen daryanka rasaasta kadhacda hubka culus iyo iftiin xoog badan oo ka imaanayey waxyaalo ay ku […]
Gudoomiyihii Hore G.baandir iyo Duqii Muqdisho Gen Muungaab ayaa Ka Tacsiyeeyay Geerida Gud.Yariisow
August 1, 2019 August 1, 2019 MogadishuComment(0)
Gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada iyo Horumarka Ahaana Gudoomiyihii Hore ee gobolka banaadir iyo Duqii Magaalada muqdisho Gen Hassan mohamed Hussen muungaab Ayaa war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa facebook Kaga Tacsiyeeyay shacabka somaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka gobolka banaadir geeridii Ku timid alaha u naxariistee Gudoomiyaha gobolka banaadir iyo Duqa magalada muqdisho Eng […]
Faafaahin:-Duqeen Lagu Beegsaday Saraakiil Ka Tirsan Alshabaab
Wararka nagasoo gaaraya Jubooyinka iyo shabeelaha hoose aya sheegaya in gelinkii danbe ee xaley duqeymo kala duwan kadhaceen degmooyin iyo deegano katirsan gaboladaasi. Weeraradaan ayaa lasheegey in ay ka kala dhaceen Degmada Jilib oo katirsan J/dhexe, Degmada Jamaame oo hoostagta J/hoose iyo Arabow oo ah deegaan kuyaala sh/ hoose JILIB Degmada Jilib oo katirsan Jubada […]
Ciidanka booliiska ayaa Si Qasab ah Ku Kaxeestay Wariye Magaalada Muqdisho.
July 30, 2019 July 30, 2019 MogadishuComment(0)
Ciidamada ayaa la wareegay gacan ku haynta Beerta Nabada Booliska ayaa xiray gabar weriye ah oo la yiraahdo Filsan, filsan waa wariye madaxbanaan oo ku sugan Muqdisho. Habdhaqanka booliska ee lagula kacayo suxufiyiinta madaxa-bannaan iyo xarigooda iyada oo aan warqad la haysan waa mid ka mid ah dhaqannada cusub ee booliiska Soomaaliya ay u leeyihiin […]
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka FS ayaa maanta kulan la qaatey Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Mr Nicolas Berlanga iyo khubaro ka socota hay’adda Max Planck Foundation. Kulanka ayaa la iskula lafagurey dardargelinta taageerada Midowga Yurub ee dib u eegista Dastuurka wuxuuna ku soo dhamaadey is faham. Midowga Yurub ayaa Dowlda Somaaliya ka taageero dhinacya Badan […]
FAAFAAHIN:- Duqeen Lagu Dilay Saraakiil Ka tirsan Al Shabaab
Wararka ka imaanaya magaalooyinka Jamaame, Jilib iyo Bu’aale oo ka kala tirsan gobolka Jubada Hoose iyo Gobolka Jubada dhexe ayaa sheegaya in qasaare baaxad leh kalatey weeraro diyaaradeed oo halkaasi kadhacey. Dadka deegaanka oo aan xiriir lasameyney ayaa sheegey in seqdii dhexe ee xaley ay arkeen diyaarada nalal waaweyn ifinaaya isla markaana duqeynaayo duleedka magaalooyinkan. […]
Dowlada Oo Loo Gacan Dhaafay Duubabkii Soo Dhisay !
Qaar ka mid ah oday dhaqameedyada iyo ergada soo xulay xildhibaanada baarlamaanka heer federal iyo heer dowlad goboleed ayaa gaaray deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab ay amreen inay isa soo diiwaangeliyaan. Oday dhaqameedyada iyo ergada gaartay xarumaha Al-Shabaab ayaa la sheegay in laga bedelay dharkii ay xirnaayeen loona bilaabay waxbarasho diini […]